साउनमा व्रत बसेर पतिको आयु बढ्ने भए नेपालमा कोही पनि हिन्दू महिला विधवा (एकल) हुने थिएनन् केही वर्षदेखि मेरा साथी र छिमेकीलाई भन्दै आएकी छु, ‘तिज र साउनमा मेरा लागि हरियो पोते र रातो चुरा नकिन्नू । बरु मलाई पैसा नै दिनु । त्यो पैसा जम्मा गरेर गाउँका विद्यार्थीलाई कापीकलम किन्नेछु ।’ साउनमा हरियो चुरा लगाउने र तिजमा […]
विषय प्रवेश : भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका आदिकवि हुन् । नेपाली भाषा नै सबैका लागि सुबोद्य नभएको त्यो बेलामा उनले भाषासेवाको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरे । हुन त नेपाली भाषाका कविता त्यसभन्दा पहिला नरचिएका होइनन् । तथापि सरल नेपाली भाषामा रचिएका ठूला काव्यहरू थिएनन् । तत्कालीन समाज विशेषतः धर्मप्रति अगाध आस्था भएको समाज हो । […]
जागरणसँगै अधिवेशन र अधिवेशनसँगै जागरण
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका देशले प्रभावकारी अस्तित्वका साथ खोज्नु यस बेला विशेष रूपले सान्दर्भिक भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले राष्ट्रिय जीवनका अनेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेपछि प्रतिपक्षी दलले त्यसको दृढ प्रतिवाद गरोस् भन्ने जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो । नेपाली कांग्रेससँग नागरिकका कैयौं गुनासा थिए र छन्, पटकपटक मुलुकको नेतृत्व गरेको दलसँग कतिपय सन्दर्भमा प्रश्न र गुनासा […]
मानव जीवनले आदिकालदेखि प्राकृतिक विपत्ति, सामाजिक शोषण र आर्थिक अभाव सहँदै आयो । चेतनाको कमीले यसलाई पूर्वजन्मको फल, लेखेको भाग्य अनि आफ्नै कमजोरी वा दोष ठह¥यायो । अहिले शिक्षाको विस्तारसँगै नेपालीमा जागरणको टुसा उम्रिएको छ । तैपनि विपतमा परेका द्ुःखद् समाचारहरू हरेक दिन सुन्नुपर्छ । नेपालीलाई मृत्युको भयबाट मुक्त राख्दै यस्ता विपतको व्यवस्थापन र क्षतिको […]
चाप्लुसी कि परराष्ट्र नीति ?, मोदीलाई बधाई दिन प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको हानथाप !
काठमाडौं । भारतको तल्लो सदन लोकसभा निर्वाचन मतगणना चलिरहेको बेला नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बधाई दिएका छन् । यता नेपालमा बारम्बार प्रधानमन्त्रीको पदमा बिराजमान भइसकेका प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले लोकसभा निर्वाचनको मतगणना चलिरहेका बेला जितको शुभकामना दिए । उनिहरुले बधाई दिँदा न भारतमा […]
“सम्भोगको विपरीत आसन”
डा.मतिप्रसाद ढकाल जब पुरुष सम्भोगावस्थामा श्रमले शिथिल हुन्छ तर स्त्रीको कामेच्छा भने अतृप्त नै रहन्छ तब आफ्नो अतृप्त कामवासनालाई शान्त गराउनका लागि पुरुष ऊर्ध्वमुख र स्त्री अधोमुख गरेर सम्भोगका लागि प्रवृत्त हुन्छन्, त्यसलाई सम्भोगको विपरीत आसन भनिन्छ । कामशास्त्रमा यस किसिमको आसनलाई पुरुषायित वा विपरीत रति भन्ने गरिन्छ । यस किसिमको आसनमा पुरुषलाई कुनै किसिमको […]
संसदमा कंग्रेस नेता र प्रधानमन्त्रीको रोइला !
सधै झै अशान्त रहने नेपालको संसद यसपाली पनि अशान्त नै भयो । कमजोर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेका शब्दबारे हंगामा नै मचियो । कांग्रेसका सांसदहरू मुलत यसपालीको प्रधानमन्त्री ओली सरकारले ल्याएका आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै खोट लगाउन तल्लिन भएका देखिन्थे । बिशेष गरि सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा […]
काठमाडौंको बागबजार स्थित पुरानो बसपार्क नेपालको सबै भन्दा जेठो बसपार्क हो । यो बसपार्कबाट पहिला नेपालको पुर्ब पश्चिम तिर जाने बसहरु चल्ने गर्दथे । पछि बालाजुमा नयाँ बसपार्क बने पछि त्यताका बसहरु बालाजु तिरै सरे । यता पुरानो बसपार्कबाट अरनिको हाईवे अन्तर्गत चल्ने बसहरु र काठमाडौं उपत्यका भित्र चल्ने ठुला साना सार्बजानिक सवारीहरु मात्र चल्न […]
काठमाडौं । अहिले म बयानब्बे वर्षमा हिँड्दै छु । औंलाले अक्षर पार्न गाह्रो, निकटस्थको सहयोगमा यति कोर्दै छु । शीतल निवासको क्षेत्रफल बढाउन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेमा सार्ने कुरो नउठेको भए यो झन्झट सायद गर्दिनथें । मैले २००६ कात्तिकमा निजामती जाँचमा बोर्डफस्ट भई सरकारको सिन्दूर पहिरें । श्री ३ मोहनशमशेर र कमान्डर–इन–चिफ बबरशमशेरका हजुरमा दाम चढाएर नोकरी खाएँ । करिब […]
प्रायः आफै सवारी साधन चलाएर यात्रा गरिरहनुपर्ने मलाई आज अत्यन्त ग्लानि महसुस भयो । बाटोमा कोही ट्राफिकलाई सराप्दै थिए त कोही उसलाई ड्युटी सम्झाउँदै थिए । त्यहाँ ट्राफिकको उच्च आक्रोश पनि सुनिन्थ्यो । अस्ति भर्खर काकाको शिक्षक पुत्र प्रदीपको मोटरसाइकललाई बसले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै उसको मृत्यु भएको घटना र मोटरसाइकलको ठक्करले ट्राफिकको मृत्यु भएको समाचारले […]